Amahora angu-24 aku-inthanethi: + 86-18968212829
Roller on Vibratory Roller
Steering Double-Drum Ribler Ribler
Double-Drum Ribratory Roller
Cula-Drum Ribler Roller
Isidlidlizi Sokhonkolo Wenjini Ephethiloli
I-VR yefektri ye-excavator
I-Plate compactor edume kakhulu eRomania yanelisa wonke amazinga we-EU
Ekwakhiweni, kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko ze-compactor: ipuleti, i-rammer ne-roller yomgwaqo. Futhi i-Ace-imishini igxile ku-rammer kanye nepuleti, namuhla sifuna nje ukwenza isingeniso esifushane mayelana ne-compactor plate. ENgilandi igama elithi "wacker plate" noma nje "wacker ...
I-trowel yamandla akude enenzuzo.
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe, manje umshini unemodeli ehlakaniphile futhi kwesinye isikhathi unganikeza ukusetshenziswa okungcono kunokwendabuko. Manje inkampani yethu yenza umshini omusha owodwa wokwakhiwa komgwaqo. Luhlobo olulodwa lwamandla okunyathela. Kubukeka kwehluke kancane ngomshini wethu ojwayelekile wh ...
I-Power Trowel imikhiqizo ethandwayo emshinini wokwakha umgwaqo.
Ama-trowels ethu agcwalisa ibanga lethu lamanje ngendlela enhle kakhulu, axhumanisa yonke inqubo kusuka ekuhlanganeni komhlaba kuya ezansi zikakhonkolo ezipholishiwe, futhi ingena kahle kucebo lethu lesigaba lokukhulisa ibhizinisi lethu le-Concrete Surfaces and Floors. Ngokwengezwa kwama-trowels wokugibela manje sizoba ne-comp ...
Iphampu yamanzi injini iyakhetha futhi imikhiqizo iyakhombisa
Iphampu yithuluzi elihambisa uketshezi (uketshezi noma amagesi), noma kwesinye isikhathi ama-slurries, ngomsebenzi owenziwe ngomshini, oguqulwa ngamandla kagesi abe ngamandla we-Hydraulic. Amaphampu angahlukaniswa ngamaqembu amakhulu amathathu ngokwendlela ayisebenzisayo ukuhambisa uketshezi: ukuphakamisa okuqondile, ukufuduka, i ...
Umlando nohlobo lwe-Mixer Concrete
Isihlanganisi sikakhonkolo (esivame ukubizwa ngokubizwa ngokuthi i-mixer mixer) iyithuluzi elihlanganisa usimende ngokuhlangana, njengesihlabathi noma i-gravel, namanzi akhe ukhonkolo. Isihlanganisi esijwayelekile sokhonkolo sisebenzisa isigubhu esijikelezayo ukuxuba izingxenye. Omunye wabaxube bokuqala bakakhonkolo owake wakhiwa ngo-19 ...
Okunamathiselwe kwe-Mini Excavator ukwenza Umsebenzi Ongcono
Abavukuzi abancane bavame ukuthandwa amasayithi emisebenzi anezindawo eziqinile, abakwazi ukuya lapho imishini emikhulu engakwazi khona. Izimbiwa ezincane zilungele ukusebenza emagcekeni, ngaphakathi kwezakhiwo nangocingo oluzungezile lokumba, ukuphakamisa nokuhlanza. NGIDIWA Amabhakede ajwayelekile amba emhlabeni ngezinhloso eziningi, ...
Isihlanganisi Sokhonkolo Kufanele Sanelise Izidingo Zabasebenzisi Bokugcina
Eminyakeni engu-2020 edlule umxube kakhonkolo ubuye abe yimikhiqizo edayisa phambili enkampanini yethu, futhi singanikela ngosayizi ohlukile kusuka kwaMini (80L) ukuya elolini (4.3 CBM). Futhi wonke amakhasimende ethu afuna nje ukwenza umsebenzi ongcono. Ukuthi njengomhlinzeki, imikhiqizo incike entweni eluhlaza nasekwenzeni okuhle. Ngakho ku ...
Inzuzo Mini Excavator
Ngokungafani nabembi abagcwele ngokugcwele, abembiwa abambalwa bayasebenza impela uma kukhulunywa ngokumba okuqinile kokufinyelela. Noma nini lapho uchwepheshe ezwa ukuthi banesikhala esilinganiselwe sokwenza umsebenzi wabo, bakhetha ukusebenzisa izinto zokumba mini. Kunemisebenzi eminingi engenziwa kusetshenziswa i-mini excavator. Lezi wo ...
Ngiyabonga kakhulu ngokuxhaswa nokwethembela kwakho ku-2020
Zakwethu Othandekayo, Isikhathi sifana nomcibisholo, futhi futhi unyaka omusha futhi. Ngesikhathi esikhethekile, bonke abasebenzi bethu bathanda ukudlulisa ukubonga kwethu okusuka enhliziyweni futhi sikufisela okuhle kodwa. Siyabonga ngokuba amakhasimende ethu zenani elikhulu. siyabonga ngenjabulo yokukusiza nokuhlangabezana nezidingo zakho. Ningb ...
Kulula ukudlidliza kokhonkolo okuhambelana nomndeni nokwakhiwa
Kwenye indawo yokusebenza esihlala sisebenzisa isidlidlizi sikakhonkolo ukwenza usimende ugweme ubuso be-Honeycomb. Futhi ngesikhathi sokusebenza sizothola ukuthi omunye umshini mkhulu kakhulu ukuthi ungathwala owenza uma ufuna ukwenza iphrojekthi encane ungakhohlwa ukuletha lo mshini futhi ekugcineni wenze okuthile okungalungile ...
I-excavator yokuthumela ngaphandle kanye nomxube kakhonkolo ngomklamo omusha
Sanibonani nonke lo ngu-Alex ovela kumishini ye-Ningbo ACE. Futhi kuleli sonto ngizoba nesingeniso esifushane mayelana nenkampani yethu nefektri. Ukuthi imboni yethu itholakale ngo-1996 enolwazi olungaphezulu kweminyaka engama-24 ebhizinisini lokuthekelisa. Ngalesi sikhathi, siguqula umshini usuke ku ...
Isitayela esisha nenjini ye-Mini Excavator
amamodeli wesimanje ahlangene, ayakhiqiza futhi aklanyelwe opharetha ngokuqinile engqondweni. Ifaka injini kadizili yesizukulwane esilandelayo sika-Yanmar sika-12.9hp 3TNV70-VBA2, i-SV18 idiliva i-torque engu-51.4nm ngo-1,500rpm. Banamandla futhi basebenza kahle, opharetha bayazuza ezikhathini zomjikelezo ezihola phambili, ...
Umbono: Ukuba ngumhlinzeki omuhle kakhulu womhlaba wonke wezinto zokwakha zosonkontileka abangochwepheshe